Wararkii ugu dambeeyay ee Duqeynta Falastiin | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay ee Duqeynta Falastiin
Duqeynta Israa’iil ee Marinka Gaza ayaa gashay maalintiisii ​​toddobaad, iyada oo duulimaadyo xagga cirka ah saacadihii hore ee Axadda lagu dilay ugu yaraan afar Falastiiniyiin ah, lagu dhaawacay tobanaan kale isla markaana la simay ugu yaraan laba dhisme oo la deggan yahay.
Guriga madaxa Gaza ee ururka Xamaas, Yehya al-Sinwar, ayaa sidoo kale la bartilmaameedsaday, sida laga soo xigtay TV-ga kooxda Xamaas.
Magaalada Tel Aviv ee Israa’iil, dadku waxay ku dhuunteen hoyga bambooyinka iyadoo seeriga digniinta ah ee gantaalaha soo socda ay ka dhacayaan magaalada oo dhan, militariga Israa’iilna waxay billaabeen nidaamkooda difaaca cirka ee “Iron Dome” si ay uga hortagaan gantaallada Xamaas.
Arrintan ayaa imaaneysa saacado kadib markii gantaalada Israel ay garaaceen xero qaxooti, ​​halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan siddeed caruur ah – waxayna burburiyeen dhisme aad u dheer oo ay ku yaalliin xafiisyada ururada warbaahinta, oo ay ka mid tahay Al Jazeera.
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ballan qaaday inuu sii wadayo weerarka ka dhanka ah Gaza “ilaa iyo inta lagama maarmaanka ah”, halka hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya uu yidhi “iska caabbintu isma dhiibi doonto”.
In ka badan 150 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan ugu yaraan 41 carruur ah, ayaa lagu dilay Marinka Gaza toddobaadkii la soo dhaafay. In ka badan 1000 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay.
Milatariga Israel ayaa ugu yeeray xafiiska ururada warbaahinta ee ay duqeeyeen Sabtidii “saldhig muhiim ah oo ay ka howlgalaan sirdoonka militariga Xamaas”. Daanta Galbeed ee la haysto ciidamada Israel waxay dileen ugu yaraan 13 Falastiiniyiin ah.
Ugu yaraan 10 qof oo reer Israa’iil ah ayaa sidoo kale la dilay, Ciidamada Israel ayaa sheegay in boqolaal gantaal laga soo riday Qaza kuna wajahan goobo kala duwan oo Israel ka mid ah ayna ku dareen xoojin meel u dhow deegaanka.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu kulmo galinka dambe ee maanta oo Axad ah si looga wada hadlo rabshadihii ugu xumaa ee sanado ka dilaaca Falastiin iyo Israel.
Wararkii ugu dambeeyay ee Duqeynta Falastiin was last modified: May 16th, 2021 by Admin
Xisbiga Mucaaradka Wadani oo ku horeeya doorashada Somaliland